इटहरी । इटहरी स्थित कोशि अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी चालक अनुमति पत्र अन्यत्रै सार्न लागिएकोमा ड्राइभिङ क्षेत्रमा काम गर्दै आएका बयवसायिहरूले शनिबार बिरोध जनाएका छन । ब्यवसायिहरूले पत्रकार सम्मेलन गर्दै कार्यालय सार्न लागिएकोमा बिरोध गरेका हुन ।
उनिहरूले अहिले रहदै आएको कार्यालय नै पायक रहेको र अब सार्न लागिएको स्थतानमा सेवाग्राहिहरूले झण्झट बेहोर्नुपर्ने बताउदै आएका छन । कार्यालयको आफनै भवन निर्माण हुदै गर्दा पुनः अर्को घर भाडामा लिएर सरकारी खर्च बढाउने काम बन्द गर्न ब्यवसायिहरूले अनुरोध गरेका छन ।
यातायात कार्यालय अन्यत्र स्थानमा नसार्न पटक पटक अनुरोध गरेपनि प्रमुखको मनोमानीले अन्तै सार्न लागिएको जसको कारण ड्राइभिङ सेण्टरहरू संग प्रत्यक्ष जोडिएका ब्यवसायिहरू मार्कामा परेको ड्राइभिङ स्कुल संघ प्रदेश एकका अध्यक्ष बाबुराम प्रधानले बताए ।
''व्यवसाय दर्ता नविकरण र हाम्रा उत्पादनहरुको लिखित प्रयोगात्मक परीक्षा लिई स.चा.अ.प. बितरण गर्ने कार्यालय यही भएतापनि हामी व्यवसायिलाई कुनै जानकारी नै नदिई कार्यालय सार्नु हामी प्रति अन्याय भएको महसुस गरेका छौं उनले भने'' ।
कहाबाट सुरू भयाे बिवाद ?
२०७६ साल भदौ २४ गते इटहरीको आपगाछिमा कोशि अञ्चल यातायात ब्यवसथा कार्यालय सवारी अनुमति पत्र स्थानीय दिनेश भट्टराइको घरमा रहन पुग्यो । २०७८ पुस मसान्त सम्म कार्यालय रहने भनि घर धनि भट्टराइ संग लिखित सम्झौता गरेको कार्यालयले अहिले स्थान अनुपयुक्त भएको कारण देखाउदै अन्यत्रै सार्न शुचना जारी गर्यो ।
तत्काल घर धनि दिनेश कुमार भट्टराइ कार्यालयबाट जारी भएको सुचना पढेपछि छक्क परे र सम्झौता अगावै घर खालि गराउन लागिएको भनेर अनावस्यक बिवाद झिके । ६ लेन राजमार्ग निर्माण सुरू भएदेखि नै सो स्थान अनुपयुक्त रहदै आएको थीयो ।
सवारी साधनको अब्यवस्थित पार्किङ , सेवा ग्राहिहरूको थामि नसक्नुको भिड , ट्राफिक ब्यवस्थापनमा त्यतिकै झण्झट र बढदो सवारी दुर्घटनाको पिर थाम्दै बसेको यातायात कार्यालय फराकिलो स्थानमा सर्ने भएपछि सेवाग्राहि देखि ट्राफिक सम्म खुशि देखिदै आएका छन ।
किन हुदैछ ब्यवसायिको बिरोध ?
यातायात ब्यवस्था कार्यालय अन्तरगत सवारि चालक अनुमति पत्र कार्यालय अन्यत्रै सार्न लागिएपछि ड्राइभिङ सेण्टरमा आवद्ध ब्यवसायिहरूले बिरोध गर्दै आएका छन । उनिहरूको भनाइ अनुसार अहिले सार्न लागिएको स्थान अनुपयुक्त छ तर मुख्य जडि कुरा भने ब्यवसायि आफै क्लियर भने छैनन ।
सामाजिक सञ्जालमा बिवादित कुरा पोस्ट गर्दै आएका बाबुराम प्रधान अण्डर ग्राउण्ड ड्राइभिङ सेण्टरका सञ्चालक हुन । उनकै नेतृत्वमा ड्राइभिङ स्कुल संघ प्रदेश एक स्थापना भएको छ । यातायात कार्यालय छेउमै उनले आफ्नै मातहतका लेखापढि ब्यवसाय संगै ड्राइभिङ सेण्टरहरू सञ्चालन गर्दै आएका छन जुन कानुन बिपरित सञ्चालित छन ।
प्रधानले आफ्नै ड्राइभिङ सेण्टर समेत नियम बिपरित सञ्चालन गर्दै आएका छन फलस्वोरूप उनको सो ड्राइभिङ सेण्टर नविकरण गर्न यातायात कार्यालयले नमानेपछि घर धनि दिनेश भट्टराइ संग मिलेर अनावश्यक बिवाद झिक्दै सामाजिक सञ्जालमा राख्दै आएका छन ।नविकरणकालागि ४ पटक सम्म यातायात कार्यालय धाइसकेको प्रधानलाइ ड्राइभिङ सेण्टरको मापदण्ड पुरा गर्नुस भन्दै कार्यालयका हाकिमले फर्काउने गरेका छन ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय आसपास २ दर्जन बढी लेखापढि ब्यवसाय सञ्चालन हुदै आएका छन त्यसमा पनि आधा दर्जन ड्राइभिङ सेण्टरहरू रहेका छन जुन दुइ वर्षकालागि भनेर घरधनि संग सम्झौता गरेपनि पुनः म्याद थप्दै सञ्चालन हुदै आएका छन । यातायात कार्यालय सो स्थानबाट अन्यत्रै सर्ने पक्का भएपछि ति ब्यवसायहरू टाट पलटिने अवस्था आउछ । एक त धरधनिहरू संग दुइ वर्षकोलागि भनेर भाडा थप गरिसकेको अवस्थामा कार्यालय नै अन्यत्रै सरिदिएपछि व्यवसायिहरूको रोजिरोटि नै गुम्ने खतरा देखिएकोले ड्राइभिङ सेण्टर र लेखापडि व्यवसायिहरूले ततकाल यातायात कार्यालय त्यस स्थानबाट कतै नसार्न दबाब दिदै आएका छन ।
के भन्छन सेवाग्राहिहरू ?
धनकुटा राजारानी घर भएका २४ वर्षिय राकेश मगर यातायात कार्यालय अन्यत्रै सरेको राम्रो मान्छन । मुख्य राजमार्गमा जोखिम मोलेर सेवा लिनुभन्दा बरू फराकिलो सथानमा गएर सेवा लिनुको मजा नै बेग्लै हुन्छ मगर भन्छन । ४ दिन अघि यातायात कार्यालयमा लाइसेन्स नविकरण गर्न आएका मगर आफ्नो सवारी पार्किङ गर्ने ठाउ नभएर राजमार्गमै राखेर सेवा लिएको नमिठो यथार्थ सुनाउछन ।
त्यस्तै धनकुटाबाटै लाइसेन्स नविकरणकालागि आएका ज्ञानकुमार कटुवालको पनि पिडा उस्तै छ । लाइसेन्स नविकरण गर्न भनि चार पांग्रे सवारी सहित आएका ज्ञान कुमार सवारीलाइ राजमार्गमा पार्किङ गर्दा ट्राफिकले झण्डै सवारी नै नियन्त्रणमा लिनुपरेको नमिठो यथार्थ ब्यक्त गर्छन । उनिपनि सो काृयालय यहाबाट अन्यत्रै सरेको राम्रो मान्छन । त्यस्तै सुनसरी बराहक्षेत्रबाट आएका सुमन निरौलाले भने यातायात कार्यालय अन्यत्रै सर्नुपर्नु कुरा ठिक लागेको बताउछन ।
ठाउ नभएर साघुरिदै सेवा लिनुपर्दा आफु जस्तो हजारौ सेवाग्राहिहरू प्रत्यक्ष मार्कामा परिरहेको सुनाउछन । यता इटहरीकै सानु तिवारी कार्यालय सर्नुपरेकोमा दुख ब्यक्त गर्छिन । उनले घर छेउमै रहेको कार्यालय अन्यत्रै सर्दा दुरी टाढा भएको सुनाए तर राजमार्ग भन्दा अलि टाढै रहेको र सेवा दिएको हेर्ने इच्छा उनको पनि रहेको बताइन ।
के भन्छन यातायात कार्यालयका प्रमुख ?
यातायात ब्यवस्था कार्यालय सवारी चालक अनुमतिपत्रका प्रमुख प्रेम प्रशाद सापकोटाका अनुसार कार्यालय रहेको स्थान क्रमश साघुरिदै गएको अवस्थामा निर्माणधिन ६ लेन राजमार्ग आयोजनाबाट पनि ठाउ खालि गर्न पत्र आएपछि अन्यत्रै सार्ने निर्णय गरिएको हो । सेवाग्राहिहरूले पनि सथान पायक नभएको र ट्राफिक ब्यवस्थापनमा समेत चुनौति थपिएपछि कार्यालय अन्यत्रै फराकिलो ठाउमा सौन लागिएको प्रमुख सापकोटाको भनाइ छ ।
निर्माणधिन ६ लेन सडक आयोजनाले राजमार्गले ओगटेको स्थान तत्काल छाडन अनुरोध गर्दै पत्रचार गरेपछि कार्यालयको आधा भाग नरहने हुदा अलि फराकिलो ठाउ हेरेर सार्न लागिएको जनाइएको छ । यातायात कार्यालयको आफ्नै भवन बनिन अझै डेढ वर्ष लाग्ने हुदा तत्काललाइ सुचना जारी गरी पायक स्थानको खोजि भइरहेको कार्यालय प्रमुख सापकोटाको भनाइ छ । यातायात कार्यालयको आफ्नै भवन इटहरी १० खनारमा निर्माणाधिन अवस्थामा छ । उक्त भवनलाइ हनुमान कन्ट्रक्सन ललितपुरले ठेक्का लिएर निर्माण गर्दै आएको छ ।
यता राजमार्गमा कार्यालय रहदा ट्राफिक ब्यवस्थापनमा समेत चुनौति थपिदै आएको प्रदेश एक ट्राफिक प्रहरी कार्यालय इटहरीका प्रवक्ता डिएसपि सुमन तिम्सिनाले बताए । सवारीसाधन गुडने राजमार्गमा सेवाग्राहिहरूको लाइन र उनिहरूकै सवारीहरू राखिदा ट्राफिक ब्यवस्थापन अत्यन्तै जटिल हुदै आएको प्रवक्ता डिएसपि तिम्सिना बताउछन । एक त ट्राफिक प्रहरीमा जनशक्ति अभाव छ त्यसमा पनि धेरै जसो त्यहि क्षेत्रमा खटाउनुपर्ने हुदा ट्राफिक ब्यवस्थापन नै अस्त ब्यस्त हुन्छ प्रवक्ता तिम्सिनाले थपे । सोहि सथानमा यो आर्थिक वर्षमात्रै ३१ सवारी दुर्घटना भएको ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको तथ्यांकले देखाउछ । दुर्घटनामा ६ जनाको मृत्यु भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
कहा सर्दैछ कार्यालय ?
निर्माणधिन ६ लेन राजमार्गको कारण ठाउ साघुरिएको र अन्य बिविध कारण बनाइ निष्कर्ष सहित सुनसरीको इटहरी आपगाछिस्थित यातायात ब्यवस्था कार्यालय सवारी लाइसेन्सको कार्यालय इटहरी चौक देखि २ किमि दक्षिण पश्चिममा सर्ने लगभग निश्चित भएको छ । अहिले सर्न लागिउको सथान उपयुक्त र फराकिलो समेत देखिएको छ । पार्किङ सुविधा देखि मुख्य रामार्गबाट पनि भित्र जहा सेवाग्राहिहरूले बिना झण्झट सेवा लिन सक्नेछन । ट्राफिक ब्यवस्थापनमा पनि समस्या नहुने र भिडभाड पनि नहुने स्थानमा कार्यालय सार्न लागिएको यातायात कार्यालयबाट बुझिएको छ ।